ညှို့မဂ္ဂဇင်းပြီးနောက် ပုံစံတစ်မျိုးဖြင့် အသွင်တူ ထွက်လာခဲ့သော မာယာမဂ္ဂဇင်း - အောင်သက်ခိုင်
Home » သတင်း » ညှို့မဂ္ဂဇင်းပြီးနောက် ပုံစံတစ်မျိုးဖြင့် အသွင်တူ ထွက်လာခဲ့သော မာယာမဂ္ဂဇင်း
တစ်ကြိမ်ထွက်ပြီးနောက် တားမြစ်ခြင်း ခံရသည့် ညှို့မဂ္ဂဇင်းကဲ့သို့ လိင်မှု အသားပေး မဂ္ဂဇင်းေ နာက် ပိုင်း တွင် မာယာမဂ္ဂဇင်းဟူ၍ ထွက်ပေါ်လာကြောင်း သိရသည်။ သို့သော် မာယာမဂ္ဂဇင်းအား အမြည်းဖတ် ခွင့် မရ ဘဲ ပလတ်စတစ်ဖြင့် ထုပ်ပိုး၍ တစ်အုပ် ၇၀၀၀ ကျပ်ဖြင့် ရောင်းချကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ဂျာနယ်ဟု တာဝန်ခံ အယ်ဒီတာမှာ ဒေါ်မြတ်မြတ်ခိုင် ဖြစ်ပြီး တရားဝင် မဂ္ဂဇင်း တစ်စောင် ဖြစ်ေ ကြာင်း သိရသည်။
တားမရ ဆီးမရ ယဉ်ကျေးမှု နောက်ကွယ်က ဂျာနယ်အထက်တွင် ဖော်ပြခွင့်ရခဲ့သော ဘရာရှိုး
Posted by အောင်သက်ခိုင် at 7:03 PM
ဆယ်ယောက်လောက်ကို စုပ်ပေးပြီးပြီ သမီးအတွက် လီးစုပ်တာဟာ ဒါပထမဆုံး မဟုတ်ဘူး .. နောက်ထပ် အပေါက် တပေါက်ကျန်သေးတာလည်း မမေ့နဲ့လေ……´´ သမီးလည်း တခါတလေ စိတ်တွေ ထလာရင် သမီးဟာ သမီး ပွတ်တာပဲလေ.. စောက်ဖုတ် အရက်ခံရတာ ဘယ်လိုအရသာရှိကြောင်း။ တစ်နေ့ တစ်နေ့ ကောင်မက လီးအရသာသိသွားတော့ ပြောလို့မဆုံးဘူး။ အလိုးခံရတာ ဘယ်လောက်ကောင်းကြောင်း၊ စောက်ဖုတ် အရက်ခံရတာ ဘယ်လိုအရသာရှိကြောင်း။ တစ်နေ့ တစ်နေ့ ဒီအကြောင်းတွေပဲ ကြားနေရတော့ ကျမ အလိုးခံချင်လာတာ ဆန်းသလားရှင်။
ငါအကြိုက်ဆုံး..အထူးစပါယ်ရှယ် သာယာမူမျိုးကို ဖြစ်စေတဲ့ဗျာ ..ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူး တွေကို ရရှိ စေပါတယ်။.နို့.ကြီးလိုက်တာလေူတိုင်းဟာဒီအတွက်အမြဲတမ်းလိုလားတောင်းတနေကြတယ
မြန်မာ ပါပဲ..နို့.ကြီးလိုက်တာဟေမာရယ် ခုခေတ်ကိုက အတုအယောင်တွေပေါတဲ့ အင်ခေတ်ကြီးပါ....။ သေချာတာတော့ အင်မိဖို့အတော်များပါတယ်...။ ပြည့်ဖြိုး တင်းရင်းတဲ့ ရင်သားအလှကို ပိုင်ဆိုင်လိုတာ မိန်းကလေးတိုင်းရဲ့ ဆန္ဒဖြစ်ပါ လိမ့်မယ်။အပေးကောင်းမယ် မိန်းကလေး တစ်ယောက်ရဲ့ အလှတရားကို ထင်ရှား ပေါ်လွင်စေပြီး ဆွဲဆောင်မှု ရှိစေတဲ့ အရာတွေထဲမှာ ရင်သားက မရှိမဖြစ်ပါ..တစ်သျှူးရဲ့ ကျုံ့နိုင်ဆန့်နိုင်တဲ့ စွမ်းအား လျော့နည်း လာတဲ့အခါ မျိုးတွေမှာ တွဲကျလာ တတ်ပါတယ်။ မိန်းကလေး အများစုက ရင်သား တွဲကျလာတာကို မလိုလား ကြသလို သင်တို့ရဲ့ အမျိုးသား အဖော်ကလည်း နှစ်သက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါတွေကို အသုံးပြုတာဟာ အန္တရာယ် အကင်းဆုံး၊ ငွေကုန်ကြေးကျ အသက် သာဆုံးနဲ့ ခွဲစိတ်စရာ မလိုတဲ့ နည်းလမ်း တစ်ခုပါ။ သဘာဝကရတဲ့ အရာ တွေနဲ့ ဖော်စပ် ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ လိမ်းဆေး၊ ဖျန်းဆေးတွေ အသုံးပြုပြီး သင့်ရင်သား အလှကို ပြုပြင်နိုင်ပါတယ်။ အသင့်တော်ဆုံး နည်းလမ်းဖြစ် ပါတယ်။
ခုခေတ်ကိုက အတုအယောင်တွေပေါတဲ့ အင်ခေတ်ကြီးပါ.
သင့်ရင်သားကို နှိပ်နယ်ပေးတာက ဆိုးကျိုး အန္တရာယ် တစ်စုံတစ်ရာ မပေးဘဲ သင့်ရင်သား တွဲကျတာကို ကာကွယ်ပေး နိုင်ပါတယ်။ နှိပ်နယ် ပေးတဲ့ အခါ ပြည့်ဖြိုး တင်းရင်းတဲ့ ရင်သားအလှ ရင်သားအတွက် သီးသန့် ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ အဆီနဲ့ လိမ်းဆေး တွေကို အသုံးပြုပြီး နှိပ်နယ်ပေးပါ။လိင်တံ အ၀င်အထွက်တိုင်းမှာ ပွတ်တိုက်ပေးနေတဲ့ အတွက် အမျိုးသမီးတွေမှာပြောမပြတတ်တဲ့
အထူးစပါယ်ရှယ် သာယာမူမျိုးကို ဖြစ်စေတဲ့ဗျာ..ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းသော အလှူဒါန ၅ မျိုး ပြောဆိုလာကြပါပြီငွေကြေးမရှိသော်လည်း ပေးကမ်းနိုင်သော အလှူဒါန ၅မျိုး အခါတစ်ပါး၌ လူငယ်တစ်ယောက်သည်...မှုတ်မယ်/အဖုတ်အယက်./ပေါက်စီ / ရေချိုးနေတာကို./ စုပ်လိုက် ၊ နိုယက်လိုက် ၊
ရန်ကုန်တိုင်း ဆေးရုံကြီး ဘွဲ့ရ အမျိုးသမီးဆရာဝန်၊ အမျိုးသမီး သူနာပြု အမျိုးသမီးများသာအများစုအဖြစ်တွ့မြင်ရနိုင် ဖွယ်ရှိပေသည်။ဖူဖြူဖွေးဖွေး ထောင်ထောင်မောင်းမောင်း တောင့်တောင့် ဖြောင့်ဖြောင့်၁ နာရီ ၁ သိန်းပေးဒီလိုပေးလို့ကတော့ကျွန်တော့်ကိုယ်တွေ့ပါကောင်းလွ န်းလို့ တစ်ခါခံစားဖူးရင် တစ်သက်လုံး..အကြံအဖန်ဖြစ်နေသည် .အပိုဝင်ငွေရစေမယ့်နည်းလမ်းများ မမှုတ်တတ်ပေမယ့် ကြိုးစားပြီးမှုတ်ပေးပါ့မယ် ကိုကို့ဘောင်းဘီကြယ်သီးကို လှမ်းဖြုတ်ပြီး ကိုကို့ လီး နွေးနွေးလေးကို လှမ်းကိုင်လိုက်တာပဲ တခေါက်ကို ဒေါ်လာ ၅၀) လောက်ရတယ် ပိုအရသာရှိမယ့်အရာ။ ဆော်တွေသေလောက်အောင်ကိုကြိုက်ကြပါတယ်..။ .
ပလွေအထူးပြုသင်တန်းတက်ခွင့်ရေ အမျိုးသမီး သူနာပြု
ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ပုံပန်းသဏ္ဌာန်၊ အရွယ်အစားအမျိုးမျိုး မှာလို့ရတဲ့အထိ ဖြစ်သွားပြီ။ ၀န်ထမ်းလစာနဲ့ ကုန်ဈေးနှုန်းက ဘယ်လိုမှဆက်စပ်လို့ မရဘူး။ဒီအလုပ်လုပ်တာ ငွေရလွယ်တယ်..အပေးကောင်းသလိုယူသူလည်းကောင်းသကိုး
ပလွေအထူးပြုသင်တန်းတက်ခွင့်ရေ အမျိုးသမီးဆရာဝန်၊ အမျိုးသမီး သူနာပြု .အပိုဝင်ငွေရစေမယ့်နည်းလမ်းများ!
nyinyi aung said...
ahmad ywama said...
ပညာနှင့် ဖတ်လျှင်ပညာရမည် တဏှာနဲ့ဖတ်ရင်
တဏှာပေါ့ ကျွန်တော်ကတော့ စာပေပညာဟု့သာ
မှတ်ယူပါသည် ဒီအတွက်ကြောင့် ဆတ်ရေးပေးပါ